Furraha Mashruuca Xadista carruurta Iyo Ganacsiga Xubnaha Dadka Oo Si Wayn Looga Qayliyay Burco | Togdheer News Network
Furraha Mashruuca Xadista carruurta Iyo Ganacsiga Xubnaha Dadka Oo Si Wayn Looga Qayliyay Burco
Burco(Togdhnews) Falalka sixirka iyo xadista caruurta ayaa muddooyinkanba aad looga cabanayay soo korodhkooda, isla markaana xukuumadda iyo ciidamadda amaanka ayaan weli xal rasmi ah ka gaadhin soo afjarida iyo qabashada dadka arrimahan samaynaya.
Meelaha cabshada ugu badanni ka soo yeedhaysay beryahan dambe waxa ka mid ah magaaladda Burco, isla markaanna Hooyo ka mid ah dadka dhibaatadu ka soo gaadhay qarshayaashan dhagaraysan ayaa ugu baaqday xukuumadda in dalka laga saaro dadka samaynaya falalkaa, isla markaanna waxay ka warantay Inanteedda oo gacanta u gashay dambiilayaasha faraha kula jirra mashruucan. Hooyo Deeqa Cismaan oo ah hooyadda dhashay gabadhan ay sheegtay in la sixray oo ka hadashay sida ay waxa u dhaceen waxay tidhi; “Duhurkii markii salaada laga baxay ayay baxday Inantu oo Inan kale ayay maryo u doonatay. Salaadii casar markii aan waayay ayaan reerkii garaacay waxay yidhaahdeen maanaan arag, guri kale oo xaafadayada ka mid ah baan qabtay, waan soo waayay , telefoonkeedii baan garaacay, telefoonkeediina guriguu yaallay oo ay kaga tagtay, wax telefoon ah oo kalenana ma jirin, meel kale oo aan u doonaana ma jiray oo dadkii aan garanayay waan soo wadda dhammeeyey.”
Hooyo Deeqa oo sii faahfaahinaysa siday ku heshay inanteeda waxay tidhi; “Maqribkii anniga oo aan waxba haynin oo diyaarsanaya gaadhigii baafinta ayaa laygu yidhi inantaadii oo mayd ah baa halkan taalla oo waxa arkaysay gabadh riyo xaraynaysa iyo gabadh ilmo yar oo ay dukaanka u diratay sugaysa. Gaadhigu tagsi cad buu ahaa, gabadh iyo nin baa saarnaa xaga dambe ayaa laga tuuray oo xashiish baannu moodaynay ayay yidhaahdeen dadkaa arkayay. Dabadeedna marka ay cabaar isla maqnayd ayay qaylisay oo lagu soo yaacay. Markaas baa la gartay oo anniga telefoon la ii soo diray, sidaasaan ku soo qaaday, welina koomo ayay ku jirtaa, saddex irbadoodna way ku yaallan oo lagu muday isdhaafna way bixinaysaa oo waxay leedahay waa la i qalanayaa”sidaa ayay tidhi hooyo Deeqa.
Dhinaca kale, hooyo Deeqa Cismaan ayaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa ugu baaqday inay wax ka qabtaan dadka cadowga ah ee dalka ku soo batay ee samaynaya falalka noocaas oo kale ah.“Madaxweynaha iyo xukuumaddiisa waxaanu ka codsanaynaa inay naga saaraan dadkan cadowga ah.”